Puntland Kud ka Guur oo Qanjo u guur | raascasayrmedia.com
← xulka qaranka dhalinta 17jirada somaaliyeed oo u soo baxay wareega labaad ee tartanka dhalinyarada kubada cagta qaarada africa
Dooro mid danta guud ka shaqeeya! →
April 26, 2010 · 7:47 pm
Puntland Kud ka Guur oo Qanjo u guur
Ugu horayn waxaa ka afeefanayaa in ujeedada qoraalkaygu yahay, mid shacabka lagu xusuusinayo wixii laga bi‘iyay ama ka maqan, si ay u noqdaan kuwa u heelan dantooda iyo in aanay mar kale dib u soo noqon dhacii iyo boobkii loo gaystay hantidooda, in maamul xumadii la soo maray aanay dib u soo noqon iyo weliba in madaxda aynu dooranaa noqdaan kuwa ka soo baxaan waajibaadka saaran.
Qaybtii hore ee qormada Fadeexadii Madaxwaynihii hore ee Puntland oo dib ugu noqday hogamiye Kooxeednimada ayaan ku falanqeeyay Cade Muse Xirsi iyo hayaankii awood raadiska ee uu ku baadi goobayay inuu hogaamiye ugu noqdo jifidiisa, dadaaladaasi oo qaarkood noqday kuwa uu ku fashilmay, qaar kale noqdeen kuwa u taaba galay. waxaana marakan si gaara dirada u saari doonaa sababaha ugu wayn ee Cade ku kalifaya inuu xiligan noqdo hogaamiye Kooxeed. Balse inta aynaan guda gelin arintaasi ayaa waxaan jeclahay in aan akhristayaasha qaayaha leh xusuusiyo waxyaabihii ugu waynaa ee lagu xusuusto maaamulkii uu Cade Muse gar-wadeenka ka ahaa, marka dhinac la isaga tiiriyo maamul xumadii baahsanayd ee gebi ahaan dalka saamaysay xiligii Cade, waxaa aniga lama ilaawaan igu nogday dhacdooyinkan.
“Gobolka Sool oo ka mid ah shantii gobol ee Puntland tiirka u ahaa, in maamul aan itaal dhaamin uu barqa cad ka faramaroojiyay Cade Muse.
“In maamulkii dalku lahaa uu si arxan dara ah u boobay hantidii dadka, kaasi oo Cade Muse hormood ka ahaa kama dambaystiina dhaxalkeedu noqday in shaqaalihii iyo ciidamadii nidaamka ilaalin lahaa ay waayay wax Mushahar ah sidaana ay ku gudan waayaan hawlihii loo igmaday.
“In Amnigii faraha ka baxo oo magaalooyinka dhexdooda lagu dilo madaxda dawlada, lana ugaarsado oo la afduubo shaqaalaha ajnabiga ah ee waday hawlaha gargaarka. sidaana ay dhamaan Hayadihii caalamiga dalka uga carareen.
“In Bad iyo beri dalkii la keenay shirkado Maafiya ah oo gurta khayraadka dalkeenu hodanka ka yahay sida Kaluunka iyo macdanta.
“In shilinka Somaliga ahaa noqday mid aan la qaadan, ka dib markii Makiinado shaqyidaad gaar ah leeyihiin ay daabaceen lacago fara badan oo been abuur ah, kuwaasi oo buux dhaafiyay suuqyadii ganacsiga, arintan ayaa waxay keentay in wax lagu iibsado lacagaha qalaad oo qura, waxaana laga dhaxalay in dad fara badan oo dan yar gaajo iyo macuuli asiibto iyadoo la ogyahay dhaqaalaha Puntland inta baaxasdiisu le,eg yahay.
“Xiligii Cade ayaa goboladii Puntland ee nasiibka u yeeshay in aan xiligaasi la qabsan, waxay noqdeen kuwa dayacan oo uu nidaamkii iyo kala dambayntii ka lumay ama la mid noqday meelaha aanu maamulku ka jirin.
Dhaxalkaasi foosha xun ka dib ayaa shacabka Puntland waxay ay jawaabtoodu noqotay natiijadii doorashadii madaxwaynaha ee sanadkii tegay oo Cade uu helay 8 cod oo ka mid ah 66 ka cod ee golaha Wakiilada Puntland, balse waxa ayaan daro noqotay in dibindaabyooyinkaasi ka dib uu Cade Muse ka tegi waayo Puntland sidii caadada u ahayd madaxwaynayaashii isaga ka horeeyay oo siyaasada Puntland aan dib u faragelin jirin.
Dhaqaalaha u socda Cade Muse
Hadaba maxaa keenay in Cade ka tegi waayo gobolada Puntland? oo dalkeedii uu qaar bixiyay intii hartayna aanu dux u reebin, Cade muuse ayaa ka dib markii laga helay doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore dalka uga tegi waayay arimo dhaqaale oo u sii socda awgood, kuwaasi oo kala ah.
“Heshiikii Cade Muse uu la galay mudadii uu hogaanka hayay shirkada Al Jaabiri ee Mashruucii dhoofinta xoolaha nool, heshiiskaasi oo Cade si aan xalaal ahayn u qoondaystay inuu ku yeesho neef walba oo ka dhoofaya Puntland dulsaar dhan $ 2 laba Doolarka Maraykanka ah oo Cade qaato ilaa iyo iminka, una soconaysa abid.
“Heshiikii Shikadaha Patrolka oo Cade Muse la galay xiligii uu talada hayay oo isna gaar uu u leexsaday Share gaaraya 15 % inuu yeesho Patroolka Puntland, taasi oo iyana abid u soconaysa.
Waxaa la wada ogsoon yahay in dawlada Puntland ee iminka talada haysa ay dib u eegis ku samaysay heshiisyadii Cade Muse, balse sida muuqata ay ku dhici wayday in ay meesha ka saarto Share-ka Cade ee xaaraanta ah.
“Si arimahaasi dhaqaale ee Cade Muse ay u noqdaan kuwa aan la fara gelin karin ayaa
waxa taageerayaashiisu kula taliyeen in uu dalka sii joogo aana la kala dirin ciidankii ka haray jabhadiisii GBP oo ilaa iyo iminka ku suga magaalada Qardho, kuwaasi oo uu hor istaagay in lagu daro ciidamada Puntland.
Gebagebadii Cade Muse wuxuu xaq u leeyahay in dhaqaale loo qoondeeyo maadaama uu Madaxwayne hawlgab ah yahay balse waxaa ayaan daro ah in Cade xalaashado hantida dadka oo loo ogolaado boob aan abid harayn, waxaa haboon in shacabka iyo Parlamanka Puntland ay ka dhiidhiyaan in sida axmaqnima ah uu weli u leexsanayo hantidii dalku lahaa, isla mar ahaantaan la waydiiyo wixii uu hore u lunsaday.
Faroole Muxuu Ku Dhamaa Cade Muuse.
Marka lays Barbar dhigo Cade Muuse Tegay iyo Kan Hada Jooga ee Faroole waxaan oran karaa waa ‘Waa Kud ka Guur oo Qanjo u Guur, marka laga eego dhinacyo badan sida Horumarinta Mashaariicda oo Faroole kaga duwanYahay Cade Muuse in uu Garoowe oo ah Magaalada uu ka soo jeedo oo Garoomada iyo Wadooyinka dhiso halka Deeganada kale ee Puntland lagu eego ‘Isha Cawaran ee aan Maamulka Si Fiican wax Uga Arag.
Maxaa Loo Dhisi Waayay Wadooyinka Laasqoray oo ah Magaalada kaliya ee dhaqaale xoogan ka soo Galo Puntland Marka laga hadlayo Cashuuraha Bariga kuwa bada Waxa ku Taala Warshada ugu Wayn Bariga Africa ee Soo Saarta Kalluunka taasi oo Madaxada Puntland markay Caalamka Booqanayaan ku Fanaan inay Wax Soo Saar Leeyihiin Balse aan Cashuurata laga qaado Shacabka Reer Laasqoray Dib Loogu Maal Galiyo Degmada Garoowe…..
Masiibada iyo Dulmiga Xukuumada Faroole ay Shacabka Xalaasha ka Gashay ayaa Dib Ugu soo Laabtay waxana Lagu Aafeeyay Amaan xumo waxa Sanad Gudihii la dilay ilaa 4-Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Baarlamaanka iyo Gudoomiyihii Maxkamada Bosaaso sidoo kale Wasiirka Warfaafinta Puntland Alla Naxariistii ha Geeyee Seefta Banaanka ayaa Duhur Cad Wiil Yar Yar ku Toogteen Badhtamaha Magaalada Gaalkacayo iyada oo aan ilaa wakhtigan la hayan Danbiilayaashaasi.
Ciidamada Puntland ayaa Ka Baxay Xeryihii ay ku Xeraysnaayeen kuwaasi oo Waayay Daryeel Caafimaad iyo mid dhaqaale Waxa dhawaan Xadhiga Goostay ilaa 400- oo Askari oo ku Jiray Xerada 54- kuwaasi oo aan la aqoon Meel Jaan iyo Cidhib Dhigeen.
Waxa la Muusay oo Hangool Faraaro leh lagu Qabtay Isimadii ahaa Kuwa Marjac ah ee loo Noqdo marka Khilaaf Yimaado iyaga oo Faroole ku AMray in aanay Soo Galin Karin Gudaha Madaxtooyada..
Hal Bil Gudaheed ayaa Colaado ka Soo Iftiimeen Gobolka Bari oo aan Garan karo Dhimashiid Colaadii Deegaanka Ig-dhays ee Beelaha Walaalaha ay Dirireen kuwaasi oo wali Xurguf taasi Taagan taagan tahay Mana Jiraan wax Waan Waan ah oo La kala dhex dhigay Beelaha Sidoo kale Colaadii Sarmaanyo ee Sool oo iyana Halkaasi Lagu dilay Afar Ruux oo Reer Guuraa Tan Ugu Danbaysa waxa weeyaan Tii Cagaaran oo ay ku Naf Waayeen dad Ka badan 40-Ruux Mana Jiraan Wali wax Jawaab ah oo Maamulka Faroole ka Bixiyay Arintaasi.
Intaasi oo dhan wax ka Sii daran Das Bursiga Beelaha waxa Beelaha Puntland degan laga dhex Heli Karaa ilaa 20-Beelood oo aan xitaa Agaasime Waxaadi ku Lahayn Maamulka Puntland waxana ay ka mid Yihiin kuwii Saxeexay Aaska Puntland Sanadkii 1998- Beesha Caalamka ayaa wax badan Faroole Kula Talisay inuu Maamulka uu DHisayo ku Sameeyo isku dheeli Tiraan dhanka Beelaha ah.
Fikradan waxay khaas u tahay qoraaga
Waxa Qoray Jaamac Feyte
One response to “Puntland Kud ka Guur oo Qanjo u guur”
Ninkii wax ku darsadaaba walan dhoohnaanta dhulbahante iyo dhanteetka puqland ee dhlbahante siyaasad ku maaweelinayaan waa wax lama yaabo